Online Juction Feed: 2015-07-26
गारो भा'छ सानी अचेल : गजल
गारो भा'छ सानी अचेल झर्न खोलापारी ।
त्यहीँ दिलको महासागर तर्न खोलापारी ।
यादहरु त कति कति मरेतुल्य पारिदिन्छन,
त्यहीँ यादको समिपमा पर्न खोलापारी ।
सपनिमा चन्द्रले नि कोल्टे फेरे जस्तो,
त्यहीँ चन्द्रको धरातलमा सर्न खोलापारी ।
एउटा याद बनिरह्यो जहा अतित सत्य थियो,
त्यहीँ ठाउमा चोखोमाया छर्न खोलापारी ।
- August 01, 2015 Links to this post
सामन्तका महल जति ढाल्न आउँछु आमा : गजल
सामन्तका महल जति ढाल्न आउँछु आमा ।
समानताको नयाँ दिप बाल्न आउँछु आमा ।
धेरै बस्यौ यतिन्जेल पिंजडामा थुनिएर,
गरिबका हरेक विचार सम्हाल्न आउँछु आमा ।
कुविचार र कुसंस्कारको बाण खडा गर्नेजती,
जरैदेखी निर्मुल पारि फाल्न आउछु आमा ।
नयाँ विचार समाजभित्र ल्याउन शङ्कल्पलाई,
पुरा गर्न नयाँ पाईला चाल्न आउछु आमा ।
- डि आर छित्तिज
घुघुरकोट छ अछाम
पुजेँ जसलाई मैले मन्दिर भनेर : गजल
पुजेँ जसलाई मैले मन्दिर भनेर ।
त्यहीँ सावित हुँदा जन्जिर भनेर ।
धिक्कार्दै मनलाई, थुक्दै जिबनलाई,
रोएँ दोषी त आफ्नै तक्दिर भनेर ।
मैदानै मैदानमा सयर झै लाग्थ्यो,
फेरिएसी त्यहिँ मैदान भिर भनेर ।
नपिएको, त्यहीँ बिष लाग्दैछ अचेल,
ठान्थे जसलाई मेरो शिर भनेर ।
सधैं भरी यसैगरी हाँसुन् मेरी आमा : गजल
सधै भरी यसैगरी हाँसुन मेरी आमा ।
म चाहान्छु म मरेनि बाचुन मेरी आमा ।
आउँदा आच भाईचाराको सम्बन्धमा जहिले,
एकताको माला उनी गाँसुन मेरी आमा ।
आँखाबाट झर्दा आँशु कुनै पनि नेपालिको,
झरेका ति आशुहरु साँचुन मेरी आमा ।
नेपालको सिमामाथी धावा बोल्ने जो कोहिलाई
देबि रुपि शक्ति बनि नाशुन मेरी आमा ।
बाहिर ठिक्क पार्ने तिमी : गजल
बाहिर ठिक्क पार्ने तिमी भित्र भने जाली रैछेउ,
दिनभर मात्र पानी अडिने खेतको आली रैछेउ ।
चन्द्रमुखी मुहार देखाइ एकोहोरो पार्यौ मलाई,
भित्रभित्रै मन चिर्ने तिमी एउटा फाली रै छेउ ।
तिम्रो सामु कोही रुँदैछ तर तिम्लाई कहाँ दुख्छ,
निर्दयीले बजाउने तिमी एउटा ताली रै छेउ ।
देख्नु सुन्नु केही थिएन परपरै चिनजान भयो,
बल्ल पछी थाहा भयो तिमी मेरै साली रै छेउ ।
सँगै सागर तार्छु भनि : गजल
संगै सागर तार्छु भनी किन हात थाम्यौ प्रिया ।
समुद्रको बिचमा पुगी किन आफै काम्यौ प्रिया,
दुई आत्माको मिलनलाई किन जिर्ण पार्यौ भन,
तिम्रै यादमा डुबिसके पछि किन छाम्यौ प्रिया ।
बाँच्दिन म तिमी बिना पहिले आफै भन्ने गर्यौ,
मलाई छाडी तिमी किन अर्कै संग भाग्यौ प्रिया ।
झरनाको पानी हुँ म कसले छेक्न सक्छ भन्थ्यौ,
तर तालको पानी जस्तै तिमी किन जम्यौ प्रिया ।
- मनिषा क्षेत्री
How to add Live Online Visitor Gadget on blogger : In nepali medium
के तपाईं आफ्नो ब्लगमा Live Online Visitor Gadget राख्न चाहनुहुन्छ ? अथवा तपाईंको ब्लग हाल कतिजनाले हेरिरहेको छ भनेर तपाईंको ब्लग पाठक तथा भिजिटरलाई देखाएर आफ्नो ब्लग अरुको भन्दा Unique र attractive बनाउन चाहनुहुन्छ ? यदि त्यसो हो भने तलको विडगेट कोड कपि गरेर आफ्नो Widget बनाएर राख्नुहोस् ।
=> पहिलो विधि (यस्तो Widget ले कति जना अनलाइन छ भन्ने सुचना अक्षर (Text) ले मात्र दिन्छ :
• तपाईंको साइटमा एक जना मात्र भिजिटर भएमा : 1 Online User भन्ने देखिन्छ
• दुई जना भएमा :2Online Users भन्ने सुचना देखिन्छ । अथवा दुई भन्दा धेरै जनाले अनलाइन भएर तपाईंको ब्लग हेरेमा जति जना अनलाइन युजर छ त्यति नै Online User भन्ने सुचना प्राप्त हुन्छ ।
=> दोस्रो विधि : (यो विधीले कति जना अनलाइन छ भन्ने सुचना माथीको भन्दा फरक किसिमले चित्रको सहायताबाट दिन्छ ।
* आफ्नो कसरी राख्ने Widget तथा Gadget राख्ने ? :
• Go to Blogger Home
• Gadget >> Add Gadget >> HTML/Javasprit हुँदै गएर कोड copy/past गर्ने सेभ गर्ने ।
Labels: blogger trick, internet help, nepali blogger trick, widget
Location: Machhapuchhre Bank ATM, Khairenitar
कास त्यो फलामे डन्डी
हिड्दै थिए म
ऐया ! टूटुल्को पलायो !
एउटा मानिस हुन्थ्यो
एउटा मानिस हुन्थ्यो ।
टाउको ठोक्किएको सुरमा
रिसाएर हेर्नेथिएं म
ऊ मुसुक्क हासेर
सरी है भन्नेथ्यो
उसको त्यो मुस्कानले
भित्र भित्रै मख्ख पर्दै
कर्के नजर लाउदै
इट्स ओके भन्थ्ये म
एउटा मानिस हुन्थ्यो ।:)
अनि यो छोरीको पनि
प्रेम कहानी सुरू हुन्थ्यो
एउटा मानिस हुन्थ्यो ।।।
लेखक : हराएकी परी
Audio gajal आफ्नै सम्झि तिमीलाई मायाँ गरें भुल भयो - Download
अत्यन्तै छोटो, मीठो, मार्मिक र मीठो गजल : "आफ्नै सम्झि तिमीलाई मायाँ गरें भुल भयो..." अडियो भर्सनमा डाउनलोड गरेर सुन्नुहोस् ।
Audio duration : 44 Seconds.
Audio size : 691 KB.
* यस साइट भित्र राखिएको जुनसुकै बिषयबस्तुहरु नितान्त ब्याक्तिगत प्रयोगको लागि मात्र राखिएको हो । कृपया ब्यापारीकरण नगरिदिनुहोला ।
उहि हो मेरी कसरी भनु : गजल
उहि हो मेरी कसरी भनु ।
जुनभित्र अधेरी कसरी भनूँ ।
यात्रा सबै सहज कहाँ होलान र,
यार फेरि फेरी कसरी भनूँ ।
चाहिन मैले त्यो रुपको बिश्लेषण,
र नी उसले हेरी कसरी भनु ।
सपनिमै भयनी रुवाउन एकपल,
अङ्गालोमै बेरी कसरी भनु ।
आमा तिम्रो सम्झनाले यो मन जल्दैछ : गजल
आमा तिम्रो सम्झनाले यो मन जल्दैछ ।
बाध्यताले टाढा हुदा यो ज्यान गल्दैछ ।।
दिन बित्छ काम गरेर रात बित्छ रोएर ।
बिहान सधै उठ्छु आमा आँसुले मुख धोएर ।।
प्रबासमा लर्खराउदै पाइला मेरो चल्दैछ ।
आमा तिम्रो सम्झनाले यो मन जल्दैछ ।।
बाचे पनि मरे सरी भएको छ तिम्रो छोरा ।
तिमी छैनौ साथ मेरो कस्लाई सुनौ यो कुरा ।।
तिर्न सकिन दुधको भार पीडाले आगो बल्दैछ ।
मेरो अधुरो प्रेम : गजल
क्षितिज पारी बादलको देशमा थियौ तिमी,
मन् त झन् जुन भन्दापनि धेरै टाढा रै'छ ।
बास्ना दिने सुन्दर फुल सम्झि मनमा राखेँ,
तर तिम्रो मायाँ मुटमा बिझाउने काँडा रैछ ॥
निष्ठूरी त भयौ नै कोमल मुटु समेत रेटी गयौ,
साथ किन माग्यौ तिम्ले जब मेरो नहुनु रैछ ।
म नै वेकुफ हुँ कि नियतिनै खोटो होला मेरो,
सयौं जुनी साथ दिन्छु भन्ने अर्कैको भै'छ ।
आमालाई गुनासो : गजल
म मर्दा रमाउने यहाँ धेरै छन आमा !
हेर्दा पुर्पुरो समाउने यहाँ धेरै छन् आमा !!
उद्वारमा ज्यान गए पनि आउँछु फुलेर अर्को जन्म !
जे होस हातमा दहि जमाउने धेरै छन् आमा !!
नमर्दै जमिनमा पुरिँदा के सोंच्ला यो आत्माले !
अवसर सोची धन कमाउने यहाँ धेरै छन् आमा !!
नजन्मेको छोरो सम्झी सम्झि बिर्सिएर मुस्कुराइदिनु आमा अब !
तिम्लाई हेर्दै मन घमाउने यहाँ धेरै छन् आमा !
अरु त सबथोक छ नि बाहेक तिमीलाई !
गुम्दानी सबथोक मन थप-थपाउने यहाँ धेरै छन् आमा !!
- लक्ष्मण बास्तोला 'चिन्तन'
बेगनास, हाल बगर
तपाईमा सुत्नुभन्दा अघि मोबाइल हेर्ने बानी पक्कै पनि हुनुपर्छ । नयाँ इमेल केही पो आयो कि ! फेसबुक च्याटमा कसैले केही पो भनिरहेको छ की ! ट्वीटरमा के ट्वीट भइरहेको छ र अन्त्यमा भोली बिहान त उठ्नु नै छ, अलाम सेट त गर्नै पर्यो ! यस्तै - यस्तै कारणले पनि सुत्नुअघि मोबाइल चलाउने गरिन्छ ।
यसरी मोबाइलमा रमाउदै गर्दा रात छिप्पिन सुरु हुन्छ र शरिरलाई चाहिने आवश्यक निन्द्रा पुग्दैन । मनोरोग विशेषज्ञ भन्छन् 'निन्द्रा नपुगेपछिको पहिलो असर नै दिमाखमा पर्न सुरु हुन्छ ।' सुत्नुअघि मोबाइलबाट इमेल/इन्टरनेट हेर्दैगर्दा स्त्रिनले दिने चमकले आखालाई चनाखो बनाइ राख्दछ । आँखाले आनन्द लिन थालेपछि मानिस रोमाञ्चित हुदै जान थाल्दछ, त्यतिन्जेलसम्म दिमाखपनि चनाखो नै भई बस्नुपर्ने हुन्छ ।
शरिरका कोशिकालाई आराम गर्न दिनु पनि हो । शरिरका कोशिकालाई आराम गर्न दिइएन भने टोक्सिन अर्थात एक प्रकारको बिष उत्पादन हुन सुरु हुन्छ र त्यसको प्रत्यक्ष असर दिमाखमा देखापर्दछ ।
साधारणतया ७ देखी ९ घण्टा सुत्नको लागि समय चाहिन्छ । त्यो भन्दा कम सुत्ने मानिसमा ध्यान केन्द्रित गर्न नसक्ने, सम्झन सक्ने क्षमतामा ह्रास हुने तथा सुस्त मनस्थितिको समस्या देखापर्दछ ।
मेरो भावना : भित्री मनबाट
आधा रातमा झलमल घाम खोज जस्तै,
महलको बाँस छोडी झुपडीलाई रोजे जस्तै ।
कोमल मनले हिजोसम्म पुज्थें भगवानलाई,
आज भने मन रोयो पुजौं मैले कसलाई ?
सधैं सधैं रुने मन कहिले हाँस्छ अब,
वनमा गाउने कोइली चरी कहिले आउँछ अब ?
रित्तिएको थाली बोकी मन्दिरभित्र पस्दा,
धीप-धीप बत्ती मेरै सामु मन्दिरमा बाल्दा,
जीवनको खुल्ला ढोका अन्धकारमा परेपछि,
चम्कने ती आँखाबाट बर-बर आसु झरेपछि ।
कति विश्वास गर्थे मैले पाइला अघि सार्दा,
कति मन रोयो होला बिश्वास घात गर्दा ।
- सबिना पौडेल
Download mp3 song of gorkha paltan : Ramdi pula tarane bittikai
Singer : Narayan Raimajhi
Labels: download music, folk song, movie song, narayan raimajhi, nepali music
मौलिक संविधानमा भारतीयलाई हाल्न थालेपछी : गजल
मौलिक संविधानमा भारतीयलाई हाल्न थालेपछि,
धर्म निरपेक्ष देश केवल हिन्दुमा गाल्न थालेपछि ।
किन नहोस् त आखिर हडताल अनि चर्को नाराहरु,
पूर्खौँदेखीको हाम्रो पहिचानलाई फाल्न थालेपछि ।
अयोग्यलाई योग्य र योग्य भा'कोलाई फालेपछि ।
अधर्मी दिप रातारात कालाबजारी गर्न बालेपछि ।
सुनिश्चित कसरी पो होस् त जनताका अधिकारहरु,
नयाँ चुनाव नयाँ चुनाव भनि जनताको मुख टालेपछि ।
हस्तक्षेप बढ्दैछ दिनानुदिन अशान्त हुन थालेपछि,
सरकारी सम्पत्तिहरु बेचि आफ्नो खातामा हालेपछि ।
देशमा शान्ती र सुरक्षित रहन कसरी सक्छौं हामी,
नेताले खुङ्खार अपराधीहरुलाई घर घरमा पालेपछि ।
Download dukha dine haina : Nepali kauda song
Download nepali kauda song : dukha dine haina mp3
Click on the given download icon to download and save audio file for offline listening.
* Don't forget to rename file : as "songtitle.mp3"
Labels: download music, folk song, kauda song, nepali music
Download rado rado naumati baja : Gurung Movie Song
• भाषा : गुरुङ
• चलचित्र : कर्म
• शब्द : "रादो रादो नौमती बाजा... प्रिनो सेदो आँछ्याबा तोई आता... हो आँछ्याबा तोई आता...।"
[बजाउ बजाउ नौमती बाजा... गाउ नाच नराम्रो केही हुँदैनँ... हो नराम्रो केहीँ हुँदैन... ।]
• गायक र गायिका : धन गुरुङ र शान्ती गुरुङ
Labels: download music, gurung song, nepali music
Download gurung song : khanai pardi kyo dhi ni nasa
शब्द : खनै पर्दि क्योई धिँ नि नासा तिया ङ्योमी ललेओ रंगरस चु सैं तोतिबा... कोई प्रेंस्या सेले ङ्यो तले लोदिबा...
नेपालीमा रुपान्तरण : "कहाँ पर्यो तपाईँहरुको घर र गाउँ आज हामी रमाइलो गरौं है - यो मन खुसी खुसी भैरहेको छ..."
कसरी आफ्नो blogger blog मा mp3 music player राख्ने ?
मैले यस ब्लगमा नेपाली भाषामा बुझ्न थालेको दिनदेखिनै धेरै साथीहरुले विभिन्न प्रश्नहरु गरिराख्नु भएको छ । यसै क्रममा लमजुङको साथी अजय मगर ले केही दिन अगाडी इमेलमा मलाई प्रश्न गर्नुभएको थियो - "ब्लगर ब्लगमा कसरी mp3 अथवा गित अपलोड गर्ने ।"
माफ गर्नुहोला मित्र ! ब्लगर ब्लग फ्रि ब्लग होस्टिङ कम्पनी हो । स्वभावैले सित्तैमा पाएको जुनसुकै चिजमा कयौं गुण भए तापनि एउटा न एउटा अबगुण हुन्छ नै । त्यस्तै ब्लगरको एउटा अवगुण हो सिमित भण्डारण क्षमता अथवा low web space capacity. ब्लगर ब्लग प्रदायकले (blogspot.com) ब्लगमा भिडियो र इमेज बाहेक अन्य फाइल अपलोड गर्ने सुबिधा दिएको छैन । तर चिन्ता नलिनुहोस् । तपाईंको समस्याको समधान अब बैकल्पिक तरिकाले हुन सक्छ ।
[ कृपया नोट गर्नुहोस् : म्युजिक बजाउनको लागि तपाईसँग उपर्युक्त Flash Player को आवश्यता पर्दछ र यसले तपाईंको इन्टरनेट बढी खर्च गर्न सक्छ जसको नकारात्मक असर मोबाइलबाट ब्लग ब्राउज गर्ने भिजिटरुमा नैरस्यतापन बढ्न सक्छ । ]
• सर्वप्रथम तपाईसँग Flash player support हुने जुनसुकै अनलाइन library (जस्तै : achieve.org) म्युजिक फ्रेण्डी वेवसाइटहरु अथवा क्लाउड स्टोरहरु (जस्तै : OneDrive SoundCloud, Itunes, Google rive यी बाहेक अन्य पनि) मा अपलोड भएको MP3 resource direct link हुनुपर्छ ।
* जस्तै यो soundcloud मा भण्डारण गरिएको कौडा गितको डाइरेक्ट लिंक हो जसको लिंक यस्तो छ :
अब, Blogger home >> creat new post >> html हुँदै गएर आफ्नो लिंकलाई तलको कोडसँग मिलाउनुहोस् ।
<embed type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" src="http://www.google.com/reader/ui/3523697345-audio-player.swf?audioUrl="http://media.soundcloud.com/stream/EUHT3wnKwFLD.mp3" height="27" width="320"></embed>
• अब माथीको कोडमा भएको "YOUR_MP3_FILE_ADDRESSS" भन्ने कोडलाई आफ्नै डाइरेक्ट लिंकले प्रतिस्थापन गर्नुहोस् अथवा त्यसको ठाउँमा आफ्नो लिंक राख्नुहोस् ।
अथवा यसरी राख्नुहोस् :
Labels: advance blogger trick, blogger trick, html, nepali blogger trick
Download Mp3 of Kauda Song : Bhayo Bheta Jhamke Sajhaima
Nepali lok geet kauda song : bhayo bheta jhamke sajhai ma
* Don't forgot to rename file as "song title.mp3"
Labels: download music, kauda song, nepali music
Download kauda song : fula vaye
Download nepali kauda song : fula vaye mp3
Download magar ethnic modern kauda song
Downliad Nepali Magar Ethnic Modern Song Kauda 2013 - MS mp3
Duration: 10:31 min.
Labels: download music, kauda song, magar song, nepali music
HTML grab को सहायताबाट कसरी आफ्नो Widget बनाउने ?
यसका लागि सबभन्दा पहिले तपाईंसँग आफ्नो ब्लगको लोगो (लोगो नभएमा आफूलाई मन पर्ने इमेज) को HTML source code थाहा हुनु जरुरी छ ।
* नोट : आफ्नो लोगो तथा इमेजको HTML कोड थाहा नपाएमा यो ट्रिक्स कसरी कुनै Image को HTML code source थाहा पाउने र त्यसको उपयोग गर्ने ? पढ्नुहोस् ।
- अब तलको code copy गर्नुहोस ।
- आफ्नो वेव/ब्लग URL र लोगो तथा Image html code मा दिइएको दोस्रो चाहिँ image URL ले माथीको कोडलाई मिलाउनुहोस् ।
• http://www.yourURL.com को सट्टामा आफ्नो URL राख्नुहोस् ।
• www.yourURL.com/image.jpg को ठाउँमा आफ्नो Image HTML code मा भएको दोस्रो चाहीँ इमेज URL राख्नुहोस् ।
- यदि तपाईं चाहनुहुन्छ भने तलको widget code copy गरेर आफ्नो ब्लग पोस्टमा past पनि गर्न सक्नुहुन्छ ।
अब कसरी आफ्नो सर्कलको साथीहरुलाई उक्त कोड कपि गरेर आफ्नो HTML/JavaSprit Gadget मा राख्न लगाउनुहोस् ।
# के तपाईंलाई यो ब्लग साइट र यस भित्र समावेश भएको विषयबस्तु मन पर्यो ? यदि मन पर्यो भने आफ्नो HTML/JavaSprit Widget मा गएर राख्दिनुहोला ।
यस साइटको HTML widget code :
# ब्लगरमा कसरी HTML/JavaSprit Widget वा Gadget राख्ने ?
1. Go to blogger >> add gadget >> HTML/Javasprit and past code.
धन्यवाद ! नियमित रुपमा यस साइटमा भिजिट गर्दै गर्नुहोला ।
Labels: blogger trick, html, internet help, nepali blogger trick, widget
कसरी कुनै Image को HTML code source थाहा पाउने र त्यसको उपयोग गर्ने ?
* यदि तपाईं नयाँ ब्लगर हुनुहुन्छ भने यो पोस्ट अति नै काम लाग्छ र जान्न अपरिहार्य पनि छ । तर यदि तपाईँले ब्लग चलाउनुभएको धेरै नै भइसक्यो भने यो ट्रिक्स तपाईंको लागि सामान्य हुने छ ।
१. आफ्नो ब्लगर होममा गएर जिमेल अथवा गुगल एकाउन्ट लग इन गर्नुहोस् । or Log in your www.blogger.com/home with the help of your your google account. or directly click here => Blogger Home
* इमेज अपलोड तपाइँले आफ्नो ब्लगरको आधिकारिक एप्स (Blogger, Blogger droid, Blogspot, etc) र विभिन्न ब्राउजरहरुबाट अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ । तर proxy browser (opera mini) बाट भने मिल्दैन ।
२. अब Post >>new post हुँदै गएर आफ्नो कम्प्युटर वा डिभासमा रहेको इमेजलाई draft मा अपलोड गर्नुहोस् । इमेज पूरा अपलोड भएपछि त्यस post लाई edit गर्नुहोस् । अब त्यसलाई HTML mode मा हेर्नुहोस् । तपाईँले आफ्नो फोटोको HTML code पाउनुहुनेछ ।
* मानौं यो हामीले अपलोड गरेको सक्कली फोटो हो भने,
अब हाम्रो फोटोलाई HTML code मा रुपान्तरण गर्दा यस्तो बन्छ :
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="http://lh3.googleusercontent.com/-IKHxejxrPQY/VbGqsaFQVLI/AAAAAAAACOc/dauOnZtk6BI/s1600/Keep%252520visiting%252520this%252520site.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="http://lh3.googleusercontent.com/-IKHxejxrPQY/VbGqsaFQVLI/AAAAAAAACOc/dauOnZtk6BI/s640/Keep%252520visiting%252520this%252520site.jpg"> </a> </div>
जुनसुकै इमेजको Full HTML code दुइवटा लिंकहरुको संयोजनबाट बनेको हुन्छ । माथीको कोडमा पनि तपाईंले दुइटा लिंकहरु क्रमश पहिलो :
लिंकहरुको संयोजनबाट बनेको देख्नुभएको छ ।
# Image को HTML source त थाहा पाइयो तर तपाईँलाई यसको के उपयोग छ त भन्ने कौतुहलता जाग्न सक्छ । यो कोड तपाईंलाई विभिन्न क्षेत्रमा काम लाग्छ । जस्तो कि :
• Image मा आफ्नो address मा लिंक गर्न
• आफ्नो ब्लगको HTML widget बनाउन
• ब्लग पोस्टमा इमेज अपलोड नगरी डाइरेक्ट HTML mode बाट इमेज राख्न ।
यससँग सम्बन्धित ट्रिक्सहरु पढ्न माथीको लिंकमा क्लिक गर्नुहोस् ।